बाइकको सुरक्षा कसरी गर्ने ? यस्ता छन् १० उपाय
नेपालमा बाइक तथा स्कुटरको बिक्री बर्सेनि बढ्दो छ। साथै, दुईपांग्रे भरपर्दो सवारीका रूपमा पनि चिनिन्छ। धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, आफ्नो बाइक तथा स्कुटरलाई कसरी कन्डिसनमा राख्ने ? बाइक तथा स्कुटरको लाइफ बढाउन चालकले धेरै कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। बाइक कन्डिसनमा राख्ने १० ‘टिप्स’ यस्ता छन्ः
१. हामी जहिल्लै बाइक/स्कुटर सिंगल स्ट्यान्डमा पार्किङ गर्छौं। सकेसम्म डबल स्ट्यान्डमा पार्किङ गर्नुपर्छ। यसले बाइकलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ।
२. बाइकको कम्पनीको नियमानुसार नियमित सर्भिसिङ गर्नुपर्छ। मोबिल (इन्जिन आयल) पनि समय समयमा परिवर्तन गरिरहनु पर्छ। समयमा मोबिल फेरेमा इन्जिनको पर्फर्मेन्स पनि बढ्छ।
३. बाइकलाई धुलो र हिलोबाट बचाउनुपर्छ। बाइक फोहोर हुनेबित्तिकै धोइहाल्नु पर्छ। बाइक चलाउने बेलामा धुलो झार्नुपर्छ। बाइकको डिस्कमा धुलो/हिलो टाँस्सिन दिनु हुँदैन। बाइकमा धुलो/हिलो जमेमा बाइकमा खिया लाग्छ। साथै, बाइकको ‘लाइफ’ पनि कम हुन्छ।
४. बाइक चलाउनु अगाडि पछाडिको चक्का हातले घुमाएर हेनुपर्छ। चक्कामा हावा कम भएको शंका लाग्नासाथ वर्कशपमा गएर हावा हाल्नुपर्छ। साताको एक पटक चक्कामा हावाको ‘प्रेसर’ चेक गर्नु राम्रो हुन्छ। चक्कामा हावाको सन्तुलन नभए टायर छिट्टै बिग्रिन्छ।
५. बाइक गुडाउँदा ब्रेक, क्लच र एक्सिलेटरको सन्तुलन मिलाउनु पर्छ। कतिपय बाइकमा ‘इको लाइट’ भनेर एउटा इन्डिकेटर राखिएको हुन्छ। इन्डिकेटर संकेत (हरियो) हेरेर बाइक चलाउँदा राम्रो हुन्छ। यदि बत्ती पहेँलो वा रातो बलेमा बाइक सन्तुलनमा नभएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसरी चलाउँदा इन्धन खपत त घट्छ नै बाइकको लाइफ पनि बढ्न जान्छ।
६. बाइकको लाइफ बढाउन सधैं ओरिजिनल (जेन्युन) पार्टपुर्जाको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसो गर्दा बाइक सुरक्षित पनि हुन्छ।
७. बाइकबाट धेरै माइलेज पाउन पेट्रोल विहान वा बेलुकाको समयमा हाल्नुपर्छ। तापक्रम कम भएको समयमा तेल हाल्नु राम्रो मानिन्छ। कम तापक्रम भएको समयमा तेल हाल्दा सही माइलेज पाउन सकिन्छ।
८. बाइक चलाउँदा ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्छ। चलाउने बेलामा लाइटदेखि सबै इन्डिकेटर चेक गर्नुपर्छ।
९. तोकिएको भन्दा लोड बढी राखेर कुदाउँदा पनि बाइक चाँडै बिग्रिने, लाइफ घट्ने लगायत समस्या देखिन्छन्।
१०. बाइक अनावश्यक रूपमा तीव्र गतिमा कुदाउनु हुँदैन। साथै, बाइक स्टार्ट गर्नेबित्तिकै एकैचोटी एक्सिलेटर बटारेर स्पिड लिनु हुँदैन।